‘एक दिनमा सय ग्रामभन्दा बढी मासु खानु हुँदैन’ स्वस्थ मासु कसरी चिन्ने ?
काठमाडाैँ । नेपालीको घर घरमा दसैं भित्रिसकेको छ । दसैंको पहिलो दिन घरघरमा घटस्थापना गरेपछि दसैं सुरू भएको हो ।
बडादसैंको समय मौसमी फ्लु जस्ता रोगहरूको संक्रमणको जोखिम पनि हुन्छ । बालबालिका तथा वृद्धवृद्धाले अझ बढी स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउनु पर्छ । मासु आफँैमा अत्याधिक बोसो हुने र पकाउँदा पनि धेरै तेल प्रयोग गरिने भएकोले मासु खाँदा स्वास्थ्यमा असर पुग्ने हुन्छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा थप ५१३ जनामा कोरोना पुष्टि, ८ जनाको मृत्यु
आज शनिबार, हेर्नुहोस् कुन राशि हुनेको लागि कति शुभ ?
थप ७०८ जनामा कोरोना पुष्टि, ११ को मृत्यु
१२ वर्षमाथिका किशोरकिशोरीलाई दिन लागेको फाइजर खोप कति प्रभावकारी ?